समयको बलिदान : #SacredGames2
सन् २०१६ मा भिडियो स्ट्रिम गर्ने अमेरिकी कम्पनी नेटफ्लिक्सले नेपालसहित विश्वका १९० देशमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्‍यो। छिमेकी देश भारतमा त कार्यालय नै खोल्यो। तर लोकल कन्टेन्ट दिएर आफ्नो सेवाप्रति आकर्षित गर्ने काम भने दुई वर्षपछि अर्थात् पोहोर सन् २०१८ मा मात्रै सुरु गर्‍यो। यसको लागि उसले बनाएको पहिलो ओरिजिनल सिरिज थियो- Sacred Games. एक महिना सित्तैमा हेर्न पाइने भएकोले नेपालमा पनि यही सिरिजका कारण नेटफ्लिक्स लोकप्रिय हुन थाल्यो।
अमेरिकी डलरमा मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले त्यो भुक्तान गर्न समस्या हुने भए पनि पेपाल वा विदेशमा बसेकाहरुले खोलेको अकाउन्ट आदिबाट नेपालमा पनि नेटफ्लिक्स हेर्नेहरु धेरै भइसकेका छन्।
विक्रम चन्द्राको क्राइम थ्रिलर उपन्यास सेक्रेड गेम्सलाई ८ भागको सिरिज बनाएर जुलाई २०१८ मा रिलिज गरियो। पहिलो सिरिजले निकै प्रशंसा पायो। नवाजुद्दिन सिद्दिकीले गरेको गणेश गायतोन्डेको भूमिका, ‘कभी कभी तो अपुनको लगता है अपुन ही भगवान है’ भन्ने उनको डायलगले प्रशंसा पायो। ८ भागमा प्रशस्त रहस्य, रोमाञ्च र थ्रिलर थिए। मुम्बई सहर बचाउन लागिपरेका प्रहरी सरताज सिंह (सैफ अली खान) को प्रयास त्यस्तो ठाउँमा लगेर पहिलो सिजनमा अन्त्य गरिएको थियो, जसले अर्को सिरिजका लागि प्रतीक्षा गर्ने अवस्था बनाइएको थियो। त्यतिञ्जेल दोस्रो सिजन बन्ने/नबन्ने निश्चित भएको थिएन।
अन्ततः लामो समयपछि दोस्रो सिजन बन्ने घोषणा भयो। गएको अगस्त १५ मध्यरातमा ८ भागको दोस्रो सिजन रिलिज पनि भयो। दोस्रो सिजनका प्रमुख पात्र गुरुजी बारम्बार बलिदानको माग गर्छन्। यो सिरिज हेर्दा दर्शकले पनि बलिदान गर्नुपर्छ, चानचुने बलिदान हैन, लगभग आठ घण्टा।
पूरै सिरिज हेरिसकेपछि लाग्छ- पहिलो सिजन दर्शक तान्न बनाए। त्यसमा सफल पनि भए। दोस्रो सिजन दर्शकको मागका कारण बनाए। परिणाम- अधिकांश रिभ्यु नकारात्मक आए। सामाजिक सञ्जालमा त निकै उडाएर मिमहरु बनाइए। धन्न केही दिन अघि मात्र सहनिर्देशक अनुराग कश्यपले ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै ट्विटर छाडिसकेका थिए।
पहिलो सिरिजमा जस्तै यो सिरिजमा पनि प्रशस्त अश्लील संवादहरु छन्। पहिलो सिरिजमा राजीव गान्धीलक्षित संवाद विवादमा परेको थियो। यस पटक भने बलिउड निर्देशक रामगोपाल वर्मालाई उडाइएको छ। राम जी वर्मा नाम राखिएको छ, जो डनको दबाबमा फिल्म बनाउँछन्।
दोस्रो सिजनमा गणेश गायतोन्डे पहिलो सिजनमा जस्तो शक्तिशाली देखिन्नन्। उनी कहिले रको कहिले गुरुजीको कठपुतली बनिरहन्छन्। बम्बैमा जस्तै केन्यामा गणेशले आफ्नो प्रभाव फैलाउँछन्। पहिलो सिजनमा जस्तै दर्शकलाई तान्ने, उनीहरुले याद गरिरहने खालका संवाद पनि यसमा छैनन्।
पहिलो सिजनमा जस्तै हेरेपछि छाड्नै मन नलाग्ने स्थिति यस पटक छैन। यो सिजनमा पनि दुई वटा कथा समानान्तर रुपमा अघि बढ्छन्। सातौँ भागमा आएर बल्ल सरताजले ब्रेकथ्रु गर्छ। दोस्रो सिजनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग यही हो। अर्को भाग त अन्तिम भइसक्छ। दोस्रो सिजनको अन्त्य ओपन छाडिएको छ।
१ हजार पेजको उपन्यासबाट दुई सिजन तयार भइसकेपछि अर्को सिजन आउँछ कि आउँदैन, खुलेको छैन। तर पहिलो सिजनको लोकप्रियताको तुलनामा दोस्रोले पाएको प्रतिक्रिया हेर्दा थप भाग बन्नेमा शंका देखिन्छ।
**My review**#SacredGamesS1Vs #SacredGamesS2 pic.twitter.com/G79zuFWrfN
#SacredGamesS2season 1 😍Season2😂🤣 pic.twitter.com/6CYGrc3gJ6
पहिलो सिजन हेर्नुभएको छ भने दोस्रो सिजनप्रति निश्चय पनि धेरै अपेक्षा हुनसक्छ। ती अपेक्षा यो सिजनले पूरा गर्न गाह्रो छ। यो सिजन नहेर्दा पनि केही फरक नहुने खालको छ। हेर्ने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईँले बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ- ८ घण्टा समयको !
नेटफ्लिक्सका दर्शकहरु नेपालमा पनि भइसके। तर नेपाली कन्टेन्टको नाममा भारतमै बनेको नेपाली भाषाको एउटा फिल्म पाहुना मात्रै त्यहाँ छ। एक जमानामा नेपाल टेलिभिजनमा स्मरणयोग्य टेलिफिल्म र सिरियलहरु बन्ने गरेकोमा अहिले त्यो क्रम लगभग बन्द भएको छ। केही कमेडी शृङ्खलाहरुमात्रै बनिरहेका छन्। नेपाली दर्शकहरु हिन्दी सिरियलमा मस्त छन्। नेटफ्लिक्सले विश्वभर छरिएका नेपाली दर्शकहरुका लागि नेपाली ओरिजिनल कन्टेन्ट पनि कहिले बनाउला?
साताभर सुनको मूल्य ९०० ले घट्यो 2019-09-14 19:34:14यो साता सुन–चाँदीको भाउम
एकै सातामा नेप्से ३३ अंकले झर्‍यो, कारोबार पनि 2019-09-14 19:34:14यो साता पुँजीबजारमा उच्च
‘विद्यालयहरुको सबलीकरणका लागि १० वर्ष रणनीतिक योजना’ 2019-09-14 19:34:14विद्यालयको गुणात्मक सुध&
इन्द्रजात्रा हेर्न आएका विदेशी पाहुना सांस्कृतिक स्थलको भ्रमणमा 2019-09-14 19:34:14पाँच देशका ४५ जना विदेशी ê
अबको ५० वर्ष कम्युनिस्टको सरकार : दाहाल 2019-09-14 19:34:14सुवासचन्द्र नेम्वाङले ल&
सागरनाथको अतिक्रमित ‘९८.५ प्रतिशत जग्गा फिर्ता’ 2019-09-14 19:34:14सागरनाथ वन विकास परियोजन
संस्कृतिविद् टण्डनको ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ विमोचित 2019-09-14 19:34:14गुठी नेवार समुदायकोमात्&
पितृस्तम्भ निर्माण 2019-09-14 19:34:14करिब २० लाख रुपैयाँको लाग
कांग्रेस सडकमा, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको राज्यमा को सुरक्षित छ 2019-09-14 19:34:14बाँके जिल्ला सभापतिमाथि
तौलिहवा अस्पताललाई २०० ‘डेंगी किट’ हस्तान्तरण 2019-09-14 19:34:14कपिलवस्तु नगरपालिका वडा
पितृमोक्ष महायज्ञ तथा श्रीमद्भागवत कथावाचन 2019-09-14 19:34:14प्रमुख वाचक आचार्य मुरली
कैलाशले जित्यो धनगढी फुटसल लिग 2019-09-14 19:34:14फाइनलमा नबिल बैंकलाई ९—४
बेन्जिमाको दुई गोलकाे मद्दतले रियल मड्रिडद्वारा लेभान्ते तीन-दुईले 2019-09-14 10:52:41स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत
बाँकेकाे अस्पतालमा जीवितै बच्चालाई डाक्टरले मृत घाेषणा गरेकाे 2019-09-14 10:35:30बाँके -&nbsp;नेपालगञ्जमा रहे
भारतका पहिलो विदेशी खेलाडी: जो पढ्न आएका थिए 2019-09-14 10:15:18भारतीय क्रिकेट टिमका पूर
सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप नगर्न शिक्षा मन्त्रीकाे 2019-09-14 10:07:34मकवानपुर - शिक्षा, विज्ञाê
साधारण तारेखमा अदालतले छाडेकाे विप्लव कार्यकर्तालाई प्रहरीले फेरि 2019-09-14 09:21:11स्याङ्जा &ndash; साधारण तारेख
रसुवागढी नाका जोड्ने मैलुङ–स्याफ्रु सडकको पहिरो पन्छाउन सुरु 2019-09-14 09:02:33रसुवा -&nbsp;रसुवागढी नाका जो
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस् : मन्त्री विष्ट 2019-09-14 08:47:43काठमाण्डौ &ndash; श्रम, रोजगार &
हिन्दीमा कुरा गर्दा छोरी पछाडि परेको सम्झिन्छे: बलिउड 2019-09-14 08:37:38अभिनेता मनोज बाजपेयी हिन
धादिङमा बस दुर्घटना: १० जना घाइते 2019-09-14 08:22:39धादिङ -&nbsp;धादिङको सिद्धले
६ वर्षपछि मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा हवाइजहाज, असोज १० 2019-09-14 08:04:14लमजुङ &ndash; मनाङमा बन्द भएको &
प्रविधि प्रत्रकार मञ्चको साधारण सभा सम्पन्न, रेग्मीको नेतृत्वमा 2019-09-14 07:39:13काठमाण्डौ &ndash; सूचना प्रवि
भारतलाई साताैँ पटक एसीसी यू–१९ एसिया कपको उपाधि: 2019-09-14 07:12:01एसीसी यू&ndash;१९ एसिया कपको उ&#
इन्द्रजात्रामा नझुक्किनका लागि जान्नै पर्ने पाँच तथ्य 2019-09-13 04:58:51 काठमाडौँको एउटा ठूलो उत्
२५१ वर्षअघि आजकै दिन यसरी हराएका थिए पृथ्वीनारायण 2019-09-12 18:13:49 २५१ वर्षअघि कान्तिपुर एउ
नेपाली भाषामा बढ्दै गएको दरिद्रता 2019-09-12 12:00:27 • उनलाई मन पर्ने एउटा फिचë
कसैलाई जान नदिएको धरहराभित्रको उपाकु मार्गमा यात्रा गर्दा 2019-09-11 20:00:10 नौ तल्ले धरहरा चार वर्षअè
सेप्टेम्बर ११ को यो फोटोभित्र लुकेको रहस्य 2019-09-11 15:01:00 यो फोटो सम्झनुभएको छ ? १८ व&#
पुरानो फोटो पठाएर नयाँ पर्यटन मन्त्रीलाई झुक्याउँदै चाकडी 2019-09-11 14:27:13 -सन्तोष न्यौपाने/बेल्जिय
मिस नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेज पाकिस्तानीहरुको कब्जामा 2019-09-11 02:56:37 मिस नेपाल सौन्दर्य प्रति
रेलको आशा गर्ने नेपालीलाई चीनले दियो पाँच हजार 2019-09-10 12:37:07 चीनसँग धेरै नेपालीको आशा
रवि लामिछाने लगायतलाई थुनामा राख्न माग राख्दै उच्च 2019-09-10 05:21:36 टेलिभिजन प्रस्तोता रवि ल
आजदेखि यो लुकाइँदैन, बाधा हटाएर सार्वजनिक देखाइन्छ अजङ्गको 2019-09-09 16:31:41 हिजोअस्तिसम्म हनुमानढो&
काठमाडौँका मेयरलाई बल्ल थाहा भएछ- ‘भन्न पो सजिलो, 2019-09-09 03:40:02 काठमाडौँका मेयर विद्यास
हुँदाहुँदा अब गृह मन्त्रालयले टिसर्ट डिजाइनको काम पनि 2019-09-08 03:22:13 हाम्रो नेपालमा अहिले कहि